IJamani: Iinkcukacha & Amanani (Deutschland Heute)
Deutschland heute - Tatsachen
Jamani emva kokuhlanganiswa
Sinamaqela amaninzi anikezelwe kwiimbali zaseJamani , kodwa apha sifuna ukunikezela isishwankathelo esicacisiweyo seenkcukacha kunye neenyaniso malunga neJamani yangoku, abantu bayo kunye nembali yayo yakutshanje ukususela ekuhlanganiseni, xa ama-halma aseJamani asempuma nasentshonalanga aphinde ahlangene ngo-1990. isingeniso:
Geography kunye neMbali
Namhlanje iJamani yilizwe lamazwe aseYurophu.
Kodwa iJamani njengelizwe elidibeneyo litsha kakhulu kunabamelwane balo baseYurophu. IJamani yenziwa ngowe-1871 phantsi kobunkokeli bechansela u- Otto von Bismarck emva kokuba iPrussia ( Preußen ) inqobile ininzi yeYurophu ekhuluma isiJamani. Ngaphambi koko, "iJamani" yayingubudlelwane obungabonakaliyo abangama-39 baseJamani ababizwa ngokuba yiJamani League ( der Deutsche Bund ).
Ubukhosi baseJamani (i- das Kaiserreich, das deutsche Reich ) bafikelela kwi-zenith phantsi kweKaiser Wilhelm II ngaphambi nje kokuqala kweMfazwe Yehlabathi I ( der Erste Weltkrieg ) ngo-1914. Emva kokuba "iMfazwe iphelile yonke imfazwe" iJamani yazama ukuba yintando yesininzi iRiphablikhi, kodwa iRiphabliki ye-Weimar ibe yinto ehamba phambili emfutshane yokunyuka kukaHitler kunye nolawulo lokunyanzelisa "iReich Reich" yamaNazi.
Ukulandela iMfazwe Yehlabathi yesiBini, indoda enye ininzi inetyala ngokudala iDemocratic Republic of Germany namhlanje. Ngo-1949 uKonrad Adenauer waba ngu-chancellor wokuqala waseJamani, "uGeorge Washington" waseNtshona Jamani.
Ngaloo nyaka wabuye wabona ukuzalwa kwe-khampani yaseMpuma yeJamani ( eDeutsche Demokratische Republik ) kwindawo yangaphambili yeSoviet Occupation Zone. Kwiminyaka emashumi mane ezayo, abantu baseJamani kunye nembali yayo iya kwahlulwa ibe kwicandelo lesempuma nelentshonalanga.
Kodwa kwakungekho ngo-Agasti 1961 ukuba udonga lwahlula ngokwasemibini iJamani.
Udonga lwaseBerlin (i- Die Mauer ) kunye nomcingo wocingo oluxubeneyo owawunqamle umda wonke phakathi kweMpuma ne-West Jamani waba ngumqondiso omkhulu weMfazwe yeCold. Ngelo xesha iWonga yawela ngoNovemba 1989, amaJamani aye ahlala ubomi bobuhlanga obuhlukeneyo obuphakathi kweminyaka emine.
Uninzi lwabantu baseJamani, kuquka i-West German chancellor uHelut Kohl , lugxininisa ubunzima bokubuyisana nabantu abaye bahlula kwaye bahlala phantsi kweemeko ezahlukeneyo iminyaka engama-40. Nangamhla, ngaphezu kweminyaka elishumi emva kokuwa kweWonga, ukuhlanganiswa okwenyaniso kusenjongo. Kodwa xa umqobo weWonga wawusesekho, amaJamani ayengenakukhetha okunye ngaphandle kokuhlanganiswa ( afe Wiedervereinigung ).
Ngoko iJamani namhlanje ibonakala ngathi? Kuthiwani ngabantu balo, urhulumente walo, kunye neempembelelo zayo kwihlabathi namhlanje? Nazi ezinye iinkcukacha kunye namanani.
ESILANDELAYO: IJamani: Amaqiniso kunye namanani
I-Federal Republic yaseJamani ( iyafa i-Bundesrepublik Deutschland ) yilizwe laseYurophu eliphambili, zombini ngamandla oqoqosho kunye nabemi. Efumaneka malunga nendawo yeYurophu, iJamani ibona ubukhulu belizwe laseMontha yaseMelika.
Abemi: 82,800,000 (2000 est.)
Indawo: 137,803 sq. Mi. (356,910 sq. Km), ncinane kancinane kuneMontana
Amazwe angqamlekileyo: (ukususela nge-n.) KwiDenmark, ePoland, eCzech Republic, e-Austria, eSwitzerland, eFransi, eLuxembourg, eBelgium, eNetherlands
Unxwemeni: 1,385 mi (2,389 km) - uLwandle lwaseBaltic ( ukufa kweOstsee ) ngasempuma-mpuma, uLwandle lwaseNyakatho ( ukufa eNordsee ) ngasentla
Amadolophu amakhulu: i- Berlin (inkunzi) 3,477,900, i-Hamburg 1,703,800, eMunich (eMünchen) i-1,251,100, eCologne (eKöln) 963,300, eFrankfurt 656,200
Iinkonzo: Iiprostestanti (iVangeli) 38%, iRoma yamaKatolika (iKatholiski) 34%, amaSulumane 1.7%, abanye okanye abangabandakanyekanga 26.3%
URhulumente: iRiphabhlikhi yaseFarda enentando yeninzi yepalamente. Umgaqo-siseko waseJamani (i- Das Grundgesetz , uMthetho oyiSiseko) kaMeyi 23, 1949 wahlanganiswa umgaqo-siseko waseJamani ngo-Oktobha 3, 1990 (ngoku iholide yesizwe, iTek der Deutschen Einheit , Usuku loBunye baseJamani).
ISigqeba: Kukho amabini amanyeneyo omthetho. I- Bundestag yiNdlu yabameli bamaJamani okanye indlu ephantsi. Amalungu ayo atyunjwe kwiminyaka emine ekhetho oludumile. I- Bundesrat (i-Federal Council) yindlu ephezulu yaseJamani. Amalungu ayo awakhethiweyo kodwa ngamalungu oorhulumente abangama- 16 bamaLänder okanye abameli bawo.
Ngokomthetho indlu ephezulu kufuneka imvume nayiphi na imithetho echaphazela iiLänder.
Iintloko zikaRhulumente: Umongameli we-federal ( der Bundespräsident ) uyintloko yentloko yelizwe, kodwa yena akanalo amandla okwenene kwezopolitiko. Unalo i-ofisi iminyaka eyi-5 kwaye inokukhethwa kwakhona kuphela. Umongameli we-federal wamanje nguHorst Köhler (ukususela ngoJulayi 2004).
I-chancellor federal ( der Bundeskanzler ) yi-"yokuqala" yaseJamani kunye nenkokeli yezopolitiko. Yena ukonyulwa yi- Bundestag iminyaka eli-4. I-chancellor ingasuswa kunye nevoti engathembekiyo, kodwa oku akunqabile. Ukulandela ukhetho lukaSeptemba 2005, u- Angela Merkel (i-CDU) wathatha isikhundla sikaGerhard Schröder (SPD) njenge-chancellor. NgoNovemba ukuvota kwi- Bundestag yenze iChanzlerin yokuqala ye-Merkel eJamani. Urhulumente "ulungelelaniso olukhulu" lweengxoxo zekhabhinethi ziye zaqhubeka ngoNovemba. Ngenxa yeziphumo ubone iKhabhinethi yakwaMerkel.
IiNkundla: INkundla yoMgaqo-siseko ye-Federal ( das Bundesverfassungsgericht ) yinkantolo ephezulu yelizwe kunye nomgcini woMthetho oyiNqobo. Kukho iinkundla ezincinci zedolophu kunye neenkqubo.
Amazwe / amaLänder: I- Jamani ine- 16 ye-federal state (i- Bundesländer ) ngamagunya karhulumente afana nalawa ase-United States. Ihlabathi laseJalimane lalingama-11 e-Bundesländer; ezintlanu ezithiwa "amatsha amatsha" ( afe neuen Länder ) abuyiselwa emva kokuhlanganisana. (I-East Germany yayinee-15 "zezithili" nganye ebizwa ngokuba yintloko yayo.)
Iyunithi yeMali: I-euro (ye- Euro ) ithathe indawo yeDeutsche Mark xa iJamani ihlangene namanye amazwe angama-11 aseYurophu ayifaka i-euro ngoJanuwari 2002.
Jonga iDer Euro kommt.
Intaba ephakamileyo: I- Zugspitze kwi-Alps Alps kufuphi nomda we-Austrian ngu-9,720 ft (2,962 m) ekuphakameni (ngaphezulu kweJamani)
I-Almanac: IiNtaba zaseJamani
I-Almanac: Imilambo yaseJamani
Imbali YesiJamani: Iimbali Eziqulatho Page
Imbali yakutshanje: udonga lwaseBerlin
Imali: Der Euro
Imbali Yembali yeFransi
Ukudala kweRhulumente weNtlalontle yeNtshona Koloni
I-Debunking Ring i-Ring Roses
Indlela yokulungiswa (kunye nokulungiswa kwakhona) Iimpapasho zangaphambili
I-Los 10 i-Los Angeles ifumaneka kwi-Estados Unidos
I-Doodle Symbolism - Iingcambu
Ukuzisa emva kokungeniswa kweeNkcazo
Imiboniso yeZibhozo ezi-8, 1874-1886
'Elektra' Synopsis: Ibali likaRichard Strauss 'I-One-Act Opera
Ukudlala njani umdlalo weNyoka yeGolf kunye nokuThengisa
Hillary Clinton kwi-Immigration
Ukuphakamisa iBha ye-Quotes Inspiration kwi-Thanksgiving
I-Tiger Woods '3 I-British Open Open Wins
Chris Tomlin Iingoma
Iintlawulo Zentlawulo ezifumanekayo kwiicawa
I-Spot Hot Spot yaseHawaii